Isiraely Mampiditra Zotra Mitokana ho an’ny Jiosy ho an’ny Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2013 22:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Deutsch, srpski, русский, عربي, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Araka ny bilaogin'ny gazety-boky +972 :
Hisy zotra vaovao hitondra Palestiniana fotsiny ihany. Milaza ny mpitondra fanjakana fa tsy fanavakavahana io, saingy miteny ho azy ny fanavakavahana mahazo ny mpiasa Palestiniana.
Nohazavaina ao amin'ny lahatsoratra:
Mifanizina ao anaty zotra nosokafana ho an'ny “Palestiniana ihany” fa tsy zotra fitateram-bahoaka ampiasain'ny Isiraeliana, androany vao maraimbe, ireo Palestiniana nahazo fahazoan-dalana hiasa ao anatin'ny fanjakana Isiraeliana. Namoaka ny zotram-pitaterana vaovao, miainga avy eo amin'ny toera-pisavana mankany Tel Aviv sy Kfar Saba ary miverina indray mankany amin'ny toera-pisavana indray, ny minisiteran'ny fitaterana Isiraeliana, taorian'ny fitarainan'ny voanjo momba ireo Palestiniana mampiasa zotra fitateram-bahoaka iraisana amin'ny Isiraeliana rehefa handeha sy avy miasa ry zareo.
AO amin'ny Twitter ny bilaogera Tiorka Esra Doğramacı no milaza ny heviny:
Ny hany azoko lazaina dia hoe, mamazivazy angamba ianao an!
Namaly ilay Afrikana Tatsimo Bilal Randeree :
Hem, nahoana ary izy izany no toa efa niainana? Hem… Andraso anontaniako ny ray aman-dreniko, angamba afa-manazava kokoa ry zareo…
Manampy ilay Yemenita Noon Arabia:
Miantso isian'ny fanapahan-kevitra ilay mpandraharaha Jordaniana Fadi Ghandour:
Ary milaza ny fanapahan-kevitra ho tsy mampino ny mpanao gazety Isiraeliana Joseph Dana:
Sarotra Inoana ny hamakiantsika izao lohateny izao amin'ny taona 2013: Nampiditra ny zotram-pitaterana ‘Palestiniana ihany’ i Isiraely